GANACSATADA UAV EXPO AMERICAS - Geofumadas
GANACSIGA UAV EXPO AMERICAS
Mee, 2021 GPS / Qalabka, Engineering, tabo cusub
Bishan Sebtember 7,8, 9 iyo XNUMX ee sanadkaan waxaa lagu qaban doonaa Las Vegas Nevada - USA the "UAV Expo Amerika". Waa bandhigii ganacsiga hormuudka u ahaa Waqooyiga Ameerika iyo shirkii diiradda saarey isdhexgalka ganacsiga UAS iyo hawlgallada lala yeesho soo bandhigayaal ka badan dhacdooyinka kale ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Waxay ka hadlaysaa mowduucyada ku saabsan dhismaha, tamarta iyo adeegyada dadweynaha, Dhirta iyo beeraha; Kaabayaasha iyo Gaadiidka; Macdanta iyo Isugeynta; Adeegyada deg-degga ah iyo badbaadada dadweynaha; Amniga; iyo Jaangoynta iyo sawir gacmeedka
Intaa waxaa dheer, waxaa ku jira mowduucyo ku saabsan caqabadaha iyo fursadaha ay soo bandhigtay COVID-19, muuqaalka nidaamka, isku xirnaanta amniga ee UAS ee hawada sare, iyo teknoolojiyada khalkhal gelinta UAS.
In yar oo ka badan 100 soo bandhigayaal oo ka socda adduunka oo dhan ayaa soo bandhigi doona hal-abuurnimadooda, wax soo saarkooda iyo xalalka la xiriira drones, dhismaha, tamarta, beeraha, kaabayaasha, gaadiidka, wax ka qabashada degdegga ah ama sawir gacmeedka. Sida ku jirta daabacadaha kale ee dhacdadan weyn, waxay soo bandhigi doontaa kal-fadhiyo toosan oo warshadeed ah oo wax ka qabta caqabadaha iyo fursadaha gaarka ah ee warshad kasta, iyo sidoo kale dhaqannada ugu wanaagsan ee isku-dhafka iyo hawlgallada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo wax ku ool ah.
Ujeeddada dhacdadu waa in lagu soo jiito isticmaaleyaasha xiiseynaya warshadaha UAV, iyagoo siinaya xiriir ku filan oo u dhexeeya xirfadleyda iyo hoggaamiyeyaasha mid kasta oo ka mid ah alaabooyinka la soo bandhigay. Sidaa darteed, abuuritaanka fursado xiriir ayaa bilaabmaya, iyo gorgortanka ku saabsan helitaanka xalalka ama alaabada la jaanqaadi karta baahiyaha. Mowduucyo qoto dheer oo la xiriira su'aalaha soo socda ayaa looga hadlay shirka:
Maxaa ka socda xeerka FAA?
Sidee diyaaradaha aan duuliyaha laheyn u dardargelin karaan ganacsigaaga?
Goorma ayaynu arki doonnaa isku-dhafnaan isku-dhafan UTM?
Sidee urur u wajihi karaa abuurista barnaamijka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee miisaanka leh?
Maxay u aqoonsan doontaa Aqoonsiga fogaanta mustaqbalka cirka?
Sidee bay aragtida dadweynaha ee drones-ku u saamaynaysaa korsashada?
Sidee urur u xisaabiyaa ROI ee UAVs?
Ma jiraa habka ugu habboon ee karti-gelinta amniga heer shirkadeed?
Maxay ka dhigan tahay hirgelinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee adeegsada barnaamijyada AI iyo ML?
Sidee hawl wadeenadu sifiican u qiyaasi karaan qiimaha tikniyoolajiyada diyaaradaha waxsoosaarka, sahlanaanta isticmaalka iyo faa'iidada?
UAS-ka fasalka ugu fiican ee ka imanaya bixiyeyaasha xalka hogaaminaya adduunka ayaa lagu soo bandhigayaa bandhigyada, hubinta hab wax ku ool ah oo lagu qiimeeyo laguna barbardhigo xalka. Hawlaha maalmaha aan soo sheegnay waxaa loo qaybiyaa sidan soo socota: Sebtember 7: Shirka ka hor, bannaanbaxyo iyo aqoon isweydaarsiyo iyo laga bilaabo Sebtember 8 ilaa 9: Barnaamijyada shirarka iyo bandhigyada.
¿MAXAA LOOGA QAYB GALAY DHACDAN?
Marka ugu horeysa, helitaanka meel fikradaha laysku weydaarsado xirfadleyda iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha waa sababaha ugu horreeya ee ka soo qaybgalka munaasabadda loo tixgelinayo. Sidee kuwani ugu yimaadeen horumarinta xalalka iyo alaabada si loo hagaajiyo waxqabadyada ama geeddi-socodka falanqeeyayaashu ay qabtaan maalin kasta.
Sababta kale ayaa ah suurtagalnimada ku xirnaanta hoggaamiyeyaasha iyo kobcinta aqoonta aagga loo baahan yahay. Marka xigta, waxaan dhihi karnaa in dhacdadan noocan ahi ay muhiim tahay in farsamooyinka ugu dambeeya laga dhigo kuwo muuqda, kor u qaadista banaanbaxyada iyo abuurista qandaraasyo ama isbahaysiyo suurtagal ah Shirka, hoggaamiyeyaasha, xirfadleyda ama horumariyayaashu waxay soo bandhigi karaan duubitaanno horudhac ah oo ku saabsan awooda wax soo saarkooda waxayna muujinayaan waxa loo abuuray.
Qaarkood ayaa isweydiin kara, yaa kaqeyb geli kara munaasabadan: Milkiilayaasha Hantida iyo Howl wadeenada, EPC (Injineerinka / Soo iibsiga / Dhismaha), AEC (Architects / Injineerada / Dhismaha), Baadhayaasha, Hogaamiyaasha Teknolojiyada, Maareeyayaasha Mashruuca, Beeraleyda iyo La-taliyayaasha Dalagyada, Jawaabayaasha Koowaad iyo Sharciga Fulinta.
Websaydhada shirarka, waxaad ka heli kartaa taxane ah webinar intabadan bilaash ah oo laxiriira codsiyada UAV. Cinwaanada siminaarradan waxaa ka mid ah: "AI Drones: Ku darista UAVs dareen leh Shaqada","Warbixinta waqtiga-dhabta ah: UAV saamaynta ay ku leedahay nabadgelyada guud”. Fursad lagu horumarinayo aqoonta laguna lug yeelanayo dhiig-miirashada aaladaha qiimaha leh ee helitaanka xogta. Intaa waxaa dheer, websaydhyada la xiriira daabacaadii hore ee shirka sidoo kale waxaa lagu soo rogay shabakadda, haddii ay jirto cid dooneysa inay dib u eegto waxyaabahaan.
Kharashaadka ku baxa shirku way kala duwan yihiin iyadoo kuxiran taariikhda la xushay iyo nooca imaanshaha inta udhaxeysa $ 150 ilaa $ 895, waxaad dooran kartaa qiimo dhimis kooxeed. Waxaa jira baasas buuxa, Maalin maalmaha ka mid, Droneresponders, iyo iridda kaliya ee qolka bandhigga. Sidoo kale waa laga hubin karaa bogga dhacdada adoo gujinaya halkan.
Kaadhka bilaashka ama bilaashka ah waxaa loo heli karaa oo kaliya aagga bandhigga, halkaas oo aad ka heli doontid meelaha lagu soo bandhigo tikniyoolajiyadda ugu casrisan uguna muhiimsan ee adduunka ee UAS, iyo sidoo kale kuwa ay abuureen jaamacadaha waaweyn ee " Teendhada Jaamacadda ”. Marka lagu daro tan kore, gelitaanka "Tiyaatarka Hoolka Bandhigga" waa la oggolaaday, kaas oo yeelan doona barnaamij waxbarasho oo loogu talagalay dhammaan dhagaystayaasha. Dadka haysta kaarka bilaashka ah waxay ku raaxeysan doonaan fadhiyada isku xirnaanta ee kaqeybgalayaasha iyo kuwa mas'uulka ka ah tarabuunka.
Weli waa suurtagal in la diro macluumaad si looga qaybqaato bandhigyada iyo sidoo kale qayb ka mid ah dadka ka hadlaya munaasabadda. Waa in la tixgeliyaa in Guddiga La-talinta iyo kuwa mas'uulka ka ah Shirka uu dhacayo, ay si taxaddar leh u darsaan dhammaan soo-jeedimaha soo-jeediyaasha suurtagalka ah ama kuwa ku hadla qoraalkan.
Waan ognahay inaan wali u nugul nahay in aan faafino COVID-19, waana sababta ururku u qaaday talaabooyin adag oo amaanka ah dhamaan ka soo qeyb galayaasha, sidaa darteed wax walbo waxay ku dhacaan jawi caafimaad qaba oo aan qatar laheyn.
Tallaabooyinka taxaddarrada ah ee la tixgeliyay waxaa ka mid ah: xaddidaadda xiriirka jirka, diiwaangelinta xiriirka la'aanta, kala fogaanshaha bulshada, nadaafadda joogtada ah, nadaafadda gacmaha, hagaajinta badbaadada cuntada, wajiga oo qasab ah (isticmaalka maaskaro), iyo waliba shaqsi ahaan u qalma in la bixiyo gargaarka degdegga ah.
KU SAABSAN QABYAALADDA
Ganacsiga UAV Expo Ameerika waxaa soo bandhigaya Commercial UAV News waxaana abaabulaya Isgaarsiinta Kala Duwan, oo ah soo saare dhacdooyin caalami ah oo sidoo kale abaabula Commercial UAV Expo Europe (Amsterdam, Netherlands), GeoBusiness Show (London, UK) iyo Geo Week, oo ka kooban Mapping International Lidar Madasha, SPAR 3D Expo & Shirka iyo AEC Next Expo & Shirka. Waxaad booqan kartaa shabakadooda bulshada wixii macluumaad dheeraad ah maalmaha soo socda: LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, e Instagram.
Nasiib wanaag sanadkaan Twingeo iyo Geofumadas ayaa kaqeybgalaya sida taageerayaasha xafladda, iyagoo si ballaaran uga hadlaya dhacdada dhammaan kuwa xiiseynaya. Waxaan kuu soo qaadan doonnaa dhammaan macluumaadka gacanta hore.
Post Previous" Hore ESRI Venezuela oo ay weheliso Edgar Díaz Villarroel oo loogu talagalay Twingeo 6th Edition
Post Next Nidaamka Bentley wuxuu ku dhawaaqayaa helitaanka SPIDANext »